गोर्खाज फाइनान्सको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि, प्रतिशेयरमूल्य कति ? - नेपालबहस
गोर्खाज फाइनान्सको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि, प्रतिशेयरमूल्य कति ?
| १६:४९:२६ मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको शेयरमूल्य एक महीनाको कारोबार अवधिमा ११६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य वैशाख २० गते प्रतिकित्ता ४७१ रहेकोमा जेठ २० गते प्रतिकित्ता १ हजार २० पुगेको हो । यस हिसाबमा एक महीना अगाडि लगानी गरेर शेयर विक्री गर्ने लगानीकर्ताले सत प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् ।
बिहीवार कम्पनीको १ लाख १ हजार ४०५ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । उक्त दिन कम्पनीको शेयरमूल्य सर्किट लेबलमा वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
यस कम्पनीको शेयर केही ठूला लगानीकर्ताले बढाएको देखिन्छ । यसो त यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा २७ करोड ३७ लाख ५२ हजार नाफा कमाएको छ । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको नाफा २६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवमा ७ करोड ४६ लाख ५८ हजार नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । नाफामा वृद्धि भएसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ ।
गत आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ११ दशमलव ४७ रहेकोमा चालू आवमा वृद्धि भएर ४२ दशमलव शून्य ५ पुगेको हो । त्यस्तै, कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा २६ करोड २६ लाख ९० हजार रहेको छ । एनएफआरएस प्रणाली अनुसार कम्पनीले यही वितरणयोग्य नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने गर्दछ । यस आधारमा कम्पनीको लाभांश क्षमता ३० दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।
आठ कम्पनीको शेयरमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट १ महिना पहिले
झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदा स्थानीयमा खुशी ५ मिनेट पहिले
बलिउड निर्देशक चन्द्रशेखरको ९७ बर्षको उमेरमा निधन ९ मिनेट पहिले
काम रोकी विद्यालय पुनर्निर्माणका इन्जिनीयर सङ्घर्षमा १४ मिनेट पहिले
विषाक्त मदिरा सेवनबाट सर्लाहीमा ८ जनाको मृत्यु २४ मिनेट पहिले
बुधवार यी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा घट्यो ३० मिनेट पहिले
पहिरो खस्दा जयपृथ्वी राजमार्ग २ दिनदेखि अवरुद्ध ३३ मिनेट पहिले
व्यासमा पहिराेको जोखिममा दुई घर ३९ मिनेट पहिले
दोर्दी खोलाले १४ घर बगायो, ५० घर उच्च जोखिममा ४१ मिनेट पहिले
बाढीले पक्की पुल क्षति, सडक सम्पर्क टुट्यो ४९ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको बजेटमा यसपालि घुमौँ कर्णालीको गुरुयोजना ५४ मिनेट पहिले
पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास ५९ मिनेट पहिले
बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न तरुण दलको निर्देशन १ घण्टा पहिले
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डको आग्रह ३ घण्टा पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा खरीद चाप उच्च ३ घण्टा पहिले
रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पोर्चुगलको शानदार जित ७ घण्टा पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा १ घण्टा पहिले
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित २ घण्टा पहिले
सवारी दुर्घटनामा परी ३ जनाको मृत्यु, चालक प्रहरी नियन्त्रणमा ५ दिन पहिले
आज वाग्मतीसहित पाँच प्रदेशमा ठूलो पानी पर्ने १ दिन पहिले
हुम्ली सेवा समाजद्धारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ६ दिन पहिले
चितवनमा वार्षिक ४० हजार युनिट रगत खपत २ दिन पहिले
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजना बनाउन गृहको निर्देशन ५ दिन पहिले
महिलाको आयआर्जनमा विकास गर्न बाख्रा उपहार ३ दिन पहिले
ओलीले विश्वासको मत नलिने, धारा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध ४ हप्ता पहिले
एड्स लगायतका सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि एक खर्ब ४६ करोड बजेट ३ हप्ता पहिले
नाइजेरियाका बन्दुकधारीद्धारा ११ जना गाउँलेको हत्या १ हप्ता पहिले
काठमाडौंको दक्षिणी भेगमा अवस्थित फर्पिङ बजार २ हप्ता पहिले
महाराष्ट्रको केमिकल कारखानामा आगलागी, १८ जना मजदूरको मृत्यु १ हप्ता पहिले
राष्ट्रिय कार्यसूचीमा साझा धारणा बनाउन सभामुखको आग्रह ५ दिन पहिले
विप्लव समूहले विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो, असार २२ गते नेपाल बन्द ! २ वर्ष पहिले
सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय ९ महिना पहिले
प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने आयोगको निर्णय ५ महिना पहिले
पहिरोमा पुरिएर ५४ वर्षीय सानुबाबुको मृत्यु ११ महिना पहिले